Home News Fahad Yasiin oo lagu eedeeyay in uu Gurigiisa kalabaxay Gudoomiyihii Xisbiga Amniga...
Fahad Yasiin oo lagu eedeeyay in uu Gurigiisa kalabaxay Gudoomiyihii Xisbiga Amniga iyo Cadaalada
Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, Wasiirkii hore ee Wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya ayaa waxaa uu Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) uu ku eedeeyay in ay hoygiisa kala baxday Wariye Yuusuf Xasan Mursal.
Yuusuf Xasan Mursal ayaa wuxuu hadda ku magacawnaa Gudoomiyaha Xisbiga Amniga & Cadaaladda, oo uu aas aasay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), oo u xiran Dowladda Somaliya.
Ciidamada Dowladda ayaa Isniintii Yuusuf Xasan Mursal ka watay hoyga uu ka degan yahay Degmada Waaberi, iyagoona ku xiray mid ka mid ah xarumaha laamaha amnigu ku leeyihiin Caasimadda Muqdisho.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya ayaa sheegay inay Ciidamada NISA duhurnimadii shalay hoygiisa kala baxeen Yuusuf Xasan Mursal, isla-markaana aanay garanayn sababta ay u xireen iyo weliba halka ay ku hayaan.
Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inaysan jirin warqad lagu soo dacweeyay Yuusuf Xasan oo lagu soo xiri karay, aan ka ahayn in hoygiisa xoog looga kaxeystay.
Sidoo kale qoyska Yuusuf Xasan ayaa waxay cadeeyeen ka hor inta aanay xirin laamaha amniga inaanay jirin warqad maxkamadeed oo lagu soo xiraayo oo la soo gaarsiiyay, sidoo kalena aanu helin wax digniin ah, marka laga soo taggo tallaaabada soo boodada ahi ee lagu soo xiray.
Waxaa soo baxaya warar aan la xaqiijin oo sheegaya in loo haysto abaabul maalmihii la soo dhaafay ay isaga iyo xubno kalaba ka wadeen Magaalada Muqdisho, kuna saabsaneyd in la dhigo baroordiiq loo samaynayo dadkii ku dhintay rabshadihii sanadkii hore ka dhacay Magaalada Baydhabo iyo in la xusuusto sharci-darrada uu ku xiran yahay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali.
Rabshadahan ayaa ka dhashay carro xoog lihi oo dadweynaha reer Baydhabo ay ka muujiyeen xarigii 13-kii bishii December ee sanadkii hore magaaladaasi loogu gaystay Sheekh Mukhtaar Roobow.
Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, gaar ahaan kuwa ka socda dalka Itoobiya ayaa Madaxtooyada Baydhabo ka dhex qabtay Abuu Mansuur, iyagoona saacad gudaheed ugu gudbiyay Magaalada Muqdisho, waxaana tan iyo xilligaa uu ku xiran yahay Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Booliska ayaa Jimcihii xoog ku kala eryay dad isugu soo baxay hotel ku yaala Magaalada Muqdisho, kuwaa oo sheegay in ujeedkoodu uu yahay inay u duceeyan Abuu Mansuur, ha yeeshee lagu amray inay halkaasi isaga taggaan.